ဆောင်းရာသီမှာ ကလေးငယ်များမဖျားနာဖို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည့်နည်းလမ်းများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ဆောင်းရာသီမှာ ကလေးငယ်များမဖျားနာဖို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည့်နည်းလမ်းများ
ရေးသားသူ Poe Ei Win ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ဆောင်းရာသီသို့ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ အအေးမိနှာစေးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းတို့အဖြစ်များလာပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလဖြစ်သည့် ကလေးအရွယ်တွင် ရောဂါပိုးမွှားများဝင်ရောက်ကာ ဖျားနာခြင်းတို့ ပိုမိုအဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ ဖြစ်မှဆေးခန်းသွားပြီး ဆေးဖိုးဝါးခကုန်မယ့်အစား မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီကာလမှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်ဖို့ ရိုးရှင်းပြီး အစွမ်းထက်တဲ့ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး နို့နှစ်ခွက် ပုံမှန်တိုက်ပါ။
ကလေးများရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုမယ့် နို့ကိုရွေးချယ်တိုက်ပေးပါ။ တစ်ချို့ကလေးတွေက နွားနို့မကြိုက်တတ်တဲ့အတွက် ဗန်နီလာအရသာနဲ့လာတဲ့ Dutch Lady မလိုင်ပြည့်နို့မှုန့်ကို စမ်းတိုက်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ Dutch Lady မလိုင်ပြည့်နို့မှုန့်မှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတည်ဆောက်ပေးသော အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်၊ ပရိုတင်း၊ ဇင့်နဲ့ ဗီတာမင် (D, A, B6) တွေ ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး နွားနို့စစ်စစ်ကနေ ထုတ်ထားတဲ့အတွက် နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုရရှိမှာပါ။ တစ်ထုတ်ချင်းအလိုက် ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ၁၈ ဂရမ်ပါ အထုပ်သေးနဲ့ မိသားစုအရွယ် ၂၀၀ ဂရမ်ပါ အထုပ်ကြီးဆိုပြီး ပက်ကေ့ခ်ျနှစ်မျိုးနဲ့လာပါတယ်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနဲ့ စူပါမားကတ်ကြီးတွေမှာ ရနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
၂။ အသီးအနှံနှင့် အရွက်များကို စုံလင်မျှတအောင်စားပေးပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အစားအစာများကို စားသုံးပေးခြင်းက တစ်သက်တာ ကိုယ်ခံအားကောင်မွန်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဗီတာမင် A, B, C, zinc နဲ့ antioxidant တွေလို အရေးကြီးအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးများကို အသီးအရွက်စားတတ်တဲ့အကျင့် သင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
အချို့သောကလေးများဟာ ညသန်းခေါင်အချိန်ထိ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့နေတာမျိုး၊ ကာတွန်းကားကြည့်နေတာမျိုး၊ စာဖတ်တာမျိုး ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားနည်းလာတဲ့အတွက် ရောဂါတွေကို ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘများအနေနဲ့ ကလေးများကို အလိုမလိုက်ဘဲ အိပ်ချိန်မှန်အောင် လေ့ကျင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ပြုလုပ်ပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကလေးများဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ဂိမ်းများကိုသာ နေ့နေ့ညညအဆော့များကာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့  ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားခြင်းတို့ နည်းပါးလာကာ အထိုင်များလာပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိပါမှ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ပြီး ဖျားနာခြင်းများကို တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေပုံမှန်ချိုးသည့်အလေ့အကျင့်ကို မွေးမြူပေးပါ။ တစ်ခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောဖို့ သင်ပေးပါ။ ကလေးများဟာ ကျောင်းမှာ၊ လမ်းမှာ၊ ကစားကွင်းမှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားရင်း မမြင်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို ထိတွေ့မိတတ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားများရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
မူလတန်းအရွယ်မှာကလေးငယ်ကို ထူးချွန်ထက်မြက်စေမယ့် နည်းလမ်း (၁၀)ခု
သင့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ သင့်အီးမေးလ်ထဲသို့ အချက်အလက်များကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အပတ်စဉ်အချိန်နဲ့အမျှ သိနိုင်ပါပြီ
သင့်ကလေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအသားအရေထိန်းပစ္စည်း ရွေးချယ်ဖို့
သင့်ကလေးကို နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ
သင့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ သင့်အီးမေးလ်ထဲသို့ အချက်အလက်များကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အပတ်စဉ်အချိန်နဲ့အမျှ သိနေနိုင်ပါပြီ
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့်အနေနဲ့ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရပါလိမ့်မယ်။ စာရယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်ထဲက လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။